Teboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo. TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo. Ny devoly dia tsy manana hafa raharaham-barotra toy izay handrava ny anjaran'izay mijoro miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha milaza ny soratra masina ao amin'ny bokin'i 1 Petera 5: 8 Mahonòna tena, miambena; satria ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Matetika ny fahavalo dia mampiasa olona hanohitra ny mpino. Toy izany ny an'i Davida Mpanjaka tamin'i Saoly Mpanjaka.
Voarakitra ao amin'ny Baiboly fa nialona an'i Saoly izy ary tiany ho faty amin'ny fomba rehetra i Davida. Imbetsaka, araka ny voasoratra ao amin'ny soratra masina, no hanandrana ny ain'i Davida Mpanjaka mpanjaka. Na izany aza, mahatoky hatrany Andriamanitra hamonjy ireo olona nantsoina tamin'ny anarany. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Salamo 34:19 Maro ny fahorian'ny marina; nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Mahatoky Andriamanitra hanafaka antsika raha toa ka matoky sy mankatoa azy amin'ny fotoana rehetra fotsiny isika.
Hivavaka amin'Andriamanitra isika anio mba hanafaka antsika amin'ny fandriky ny fahavalo. Mampiasa zavatra isan-karazany ny fahavalo hanakorontanana ny dia ataon'ireo zanak'Andriamanitra. Raha nampiasa an'i Saola hanohitra an'i David ny fahavalo, hafa kosa ny tantaran'i Josefa. Nampiasain'ny fahavalo ny vadin'ny lehiben'ny Josefa, vadin'i Portiphar hanohitra azy. Raha mba latsaka tao anatin'izany vela-pandrika i Josefa dia tsy ho afaka nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fiainany izy. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fandriky ny fahavalo rehetra manoloana ny fiainanao dia potehin'ny afon'ny Fanahy Masina.
Misy tranga izay ampiasain'ny devoly fakam-panahy isan-karazany amin'ny mpino. I Joba dia ohatra azo ampiharina tamin'io. Nampijalian'ny fahavalo mafy izy. Ny tanjon'ny fampijaliana azy dia ny hahatonga azy hahafoy an'Andriamanitra, fa i Joba kosa nifikitra tamin'ny finoany. Ny antsika dia mety tsy mitovy amin'ny an'i Jakôba, ny fahavalo dia afaka mampiasa fandrika hafa ho antsika. Mety ho aretina, mety ho aretina, mety ho zavatra hafa. Na inona na inona tian'ny devoly hampiasaina hanohitra antsika, io dia toky ananantsika ao amin'ny Tompo araka ny voalaza ao amin'ny bokin'i Salamo 124: 6-8 Isaorana anie ny Tompo Izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny. Ny fanahintsika dia afaka tahaka ny vorona afaka amin'ny fandriky ny mpihaza: tapaka ny fandrika, ka afaka isika. Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'ny Tompo, Izay nanao ny lanitra sy ny tany ”.
Fantatsika fa ny Andriamanitsika dia mahay mamonjy antsika amin'ny olona rehetra. Manambara amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny drafitry ny fahavalo rehetra hamorona fahalavoana ho anao dia simban'ny afon'ny Fanahy Masina. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny drafitra sy ny fandaharam-potoanan'ny fahavalo amin'ny fiainanao dia tsy hatao takona amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia hanohy hampiharihary ny drafitry ny fahavalo aminao amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mankalaza anao aho noho ny fahasoavanao sy ny fiarovana ahy amin'ny fiainako. Ny famindram-ponao no nitahiry ahy hatreto, ny famindram-ponao no tsy lanin'ny fahavalo. Manome voninahitra anao aho Jesosy Tompoko, avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Tompoko, mahatanty ny fampanantenanao ny teninao ao amin'ny bokin'ny Isaia 49:25 Fa izao no lazain'i Jehovah: Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina, ary ny babon'ny mahery dia voavonjy; Fa hifandahatra amin'izay miady aminao aho, ka hovonjeko ny zanakao. Mandidy aho fa ny marobe any an-danitra dia hifandahatra amin'ireo miady amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko ô, Ianao no ampingako sy ampingako famonjena ho ahy ankehitriny amin'ny fotoanan'ny filàna. Mangataka aminao aho noho ny fahasoavanao hanafaka anao amin'ny fandriky ny fahavaloko. Mangataka aho amin'ny herinao mba handringananao ny drafitry ny fahavalo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, fa voasoratra fa aza mikasika ny voahosotra nataoko ary aza manisy ratsy ny Mpaminaniko, dia manapa-kevitra aho fa tsy hisy loza hanatona ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy ratsy hanatona ny fonenako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra tendren'ny fahavalo hanara-maso ny fiainako, dia manambara ny fahafatesanao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay mitady hanisy ratsy ahy, dia izao no didiko amin'ny fahefan'ny lanitra, very ny herinao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, mananatra ny fahavalo amin'ny fiainako aho. Enga anie ka ho rava mandritra ny androm-piainako amin'ny anaran'i Jesosy ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Ny teninao dia nilaza fa hanafaka ahy amin'ny fandriky ny Fowler ianao, hanapaka ny fandriky ny Fowler ary hiantoka ny fahafahan'ny fahalalahako, miteny an'io fampanantenako io amin'ny zava-misy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompo toy ny bokin'ny Salamo 141: 9 dia nanambara fa arovy aho amin'ny valanoran'ny fandrika izay napetrany ho ahy,
Ary avy amin'ny fandriky ny mpanao meloka. Mivavaka aho mba ho eo amiko ny tanananao fiarovana amin'ny toerana rehetra alehako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo Andriamanitra ô, ny teninao dia nilaza fa hampiakatra ahy hiala amin'ny fandrika nafeniny mangingina ho ahy aho, satria Ianao no heriko. Tompoko, mijoro amin'ny fahatokiako ireo teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mandidy ny fiarovana ahy ho amin'ny zava-misy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa ny herin 'Andriamanitra Tsitoha dia handrava ny fandrika rehetra napetraky ny fahavalo ho ahy. Tahaka ny nanampianao an'i Davida handositra ny vela-pandrika rehetra nataon'i Saoly taminy, dia manapa-kevitra aho fa ny famonjena anao dia ho avy amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra hoe: Tsy hisy fiadiana miady hamely ahy. Na amin'ny fomba ahoana na manao ahoana fikasan'ny fahavalo hanafika ahy, dia aringako amin'ny afo ny drafitr'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanandramana mamono tena
Next lahatsoratraAndinin-tsoratra masina 10 hanombohana ny andronao
Joyce Burnett 17 jona 2021 Amin'ny 1:51 hariva
Mivavaha ho ahy mba hanafahana ahy amin'ny fanahin'ny fahafatesana sy ny fahavaloko
mpiasa mpiasa Jiona 21, 2021 Ao amin'ny 5: 18 am
Mamoaka didy amin'ny anaran'i JESOA Kristy aho, voavonjy ianao. Mananatra mafy ny demony mitete rehetra aho amin'ny fiainanao, mitarika azy ireo amin'ny hazofijaliana any Kalvary aho izay misy rà mandriaka be amin'ny anaran'i Jesosy. Manambara ny fahafahanao anio amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Joyce Burnett 17 jona 2021 Amin'ny 1:52 hariva
Mba hanafaka ahy amin'ny fanahin'ny fahafatesana sy ny fahavaloko
Godfrey Jiona 19, 2021 Ao amin'ny 10: 27 am
Fanamarihana: menaka vaovao kokoa aminao
Godfrey Jiona 19, 2021 Ao amin'ny 10: 30 am
mivavaha ho ahy, asa tsara mitady aho, ary ampiasain'ny rantsantanan'ANDRIAMANITRA amin'ny fiainako ny fampanantenany, satria milaza izy fa hanoratra ny lalàny ao am-pontsika
mpiasa mpiasa Jiona 23, 2021 Ao amin'ny 6: 43 am
Mivavaka aho mba hahatanteraka ny fampanantenan'Andriamanitra hatry ny ela amin'ny fiainanao. Tapitra ny fiandrasanao, enga anie ny tanan'Andriamanitra Tsitoha hitondra ny fampanantenan'ny Tompo rehetra ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
mpiasa mpiasa Jiona 27, 2021 Ao amin'ny 7: 46 am
Mivavaka amin'ny herin'ny lanitra aho, mba hahita anao io asa nofinofinao io amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ilay asa izay hampitsahatra ny krizy ara-bola amin'ny fiainanao, mivavaka aho mba hahitan'ny asa anao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ottila 23 jona 2021 Amin'ny 1:28 hariva
Mivavaka aho mba hanafahana ahy amin'ny fanafihan'ny fanahy ratsy amin'ny alàlan'ny nofy sy izay fandrika napetraky ny fahavaloko ahy. Mivavaka aho mba ho voavonjy amin'ny fanahin'ny stagnation amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako. Izaho dia miorina amin'ny finoana ny fampanantenan'ny Tompontsika sy Jesosy mpamonjy, ilay nahavita ny finoantsika. Tsy misy zavatra sarotra loatra ho an'ny Tompo, ny Egyptiana hitanao izao fa tsy hahita azy ireo intsony. Amena
Dickson Rubanzibwa Jiona 24, 2021 Ao amin'ny 8: 12 am
Niombee Mtumishi wa Bwana, Nafatiliwa na iza na iza
Vavaka hanoherana ny vady tsy misy valiny ao amin'ny nofinofy
Andinin-Baiboly 10 mahery momba ny fifadian-kanina